विहानीको खाली पेटमा पानी सँगै किसमिसको झोल पिउदा यस्ता चमत्कारिक फाईदा लिन सकिने - सुदूरखबर डटकम
विहानीको खाली पेटमा पानी सँगै किसमिसको झोल पिउदा यस्ता चमत्कारिक फाईदा लिन सकिने
label सुदूर खबर संवाददाता query_builder September, 09 2018
खाली पेट लगातार ४ दिनसम्म किशमिशको झोल पिउनुस्, कलेजो र किड्नी सफा पार्नुहोस् । सधैं बिहान किसमिसको पानी पिउनाले शरीरलाई भिटामिन लगायत फलाम पर्याप्त मात्रामा पान्छ । साथै यसमा चिनीको मात्रा पनि कम हुन्छ, यसमा प्राकृतिक एन्टीअक्सीडेन्टको मात्रा बढ्न जान्छ । जसले विरामी हुनबाट बचाउँछ ।किसकिस र त्यसको पानीलाई कलेजो र किड्नीको बिरामीलाई निको पार्न प्रयोगमा आइरहेको छ।
किसमिसिको पानी लागातार ४ दिनसम्म पिउनाले कलेजो र किड्नीले राम्ररी काम गर्न थाल्छन् र शरीरमा जमेका हानिकारक पदार्थ सबै बाहिर निस्कन्छन् । किसमिस खान स्वास्थवद्र्धक छ भने त्यसको पानी पिउनाले पाचन प्रक्रियालाई दुरुस्त हुन्छ । रगत सफा हुन्छ । एसिडीटी कम हुन्छ । हृदय बलियो हुन्छ र खराब कोलेस्ट्रल टाढा हुन्छ । यो सबै फाइदा किसमिसको पानी पिउन थालेको दुई दिनमा नै देखा पर्नेछ । किसमिसको पानी २ कप पानीमा १५० ग्राम किसमिस राखेर बनाउन बनाउन सकिन्छ ।
किसमिसको पानी बनाउने विधि
एटा प्यानमा सफा पानी उमाल्ने, फेरि त्यसमा सफा किसमिसको धुलो हालेर रातीभर पानीमा छोडिदिनुहोस् । दोस्रो दिन बिहान पानीलाई छानेर दोस्रो चोटी सानो आगोमा हल्का तताएर गरेर खाली पेट पिउनुहोस् त्यसपछि २० देखि ३५ मिनेट पर्खेर नास्ता गर्नुहोस् । यस्तो धेरैदिन सम्म गरेर लाभ उठाउनुहोस् । यसको लागि सधैं गहिरो रंगको किसकिस नै छान्नु उपयुक्त हुन्छ । सफा र चम्किलो किसमिसमा प्रायः रसायन मिलेको हुन्छ । जुन स्वास्थको लागि हानिकारक हुन्छ । यो प्रक्रियालाई एक महिनामा लागतार चार दिन सम्म गर्नुहोस् यसको कुनै साइड इफेक्ट हुँदेन। यस्तोमा यदि चिनी अलि कम खानुपर्छ । किनभने किसमिसमा पहिलेदेखि नै
फेरी आकाशियो डलरको भाउँ ! प्रदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउदै हो भने हेर्नुहोस आजको विनिमयदर- आजमिति २०७५ साल भाद्र १ गते शुक्रवारका दिनको मुद्रा बिनिमयदर
नेपालमै छ यस्तो अनौठो गाउँ जहाँ केटा नपाएर युवतीहरु बुढि कन्या बस्न बाध्य छन
मौरीको सँगत गरे फुलमा पुगिन्छ, झिंगाको सँगत गरे फोहरमा : प्रधानमन्त्री ओली
थाहा पाइराख्नुहोस आजबाट यस्ता गल्ति गरेमा जेल सजाय हुन्छ
आजबाट मुलुकी ऐन लागु, जन्मकैदको सजाय २५ वर्ष
शनिबारको दिनमा साढे सातको शनिदोष हटाउन संकटा देवीलाई एक शेयर…
सावधान ! अल्सर निकै खतरनाक रोग हो, अल्सर भए नभएको…
भर्खरै बिहे भएको परिवारमा खुसी ल्याउने जिम्मा नयाँ बुहारीको भागमा…
थन्क्याउनुहोस आफ्नो पुरानो मोटरसाइकल : नेपालमै यो ठाउँमा आजै जानुहोस…
पुरुषहरु अर्काकी श्रीमति किन ताक्ने गर्छन ? थाहा पाउनुहोस यसकारण…
सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिउँदे अधिवेसन सुरु
बलात्कार गरेर मृत्यु भयो भनेर फालेको बुहारीलाई घर बेचेर बचाउने…
त्रिशूली नदीमा फोहोर नफ्याँक्न आग्रह ! फ्याँकेमा प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही…
शनिबारको दिनमा साढे सातको शनिदोष हटाउन संकटा देवीलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ माघ ५ गते शनिबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।। #जय_संकटादेवी !!
सावधान ! अल्सर निकै खतरनाक रोग हो, अल्सर भए नभएको यसरी सकिन्छ पत्ता लगाउन
भर्खरै बिहे भएको परिवारमा खुसी ल्याउने जिम्मा नयाँ बुहारीको भागमा पर्छ । नयाँ घरमा खुसी ल्याउने १९ सुत्र।
थन्क्याउनुहोस आफ्नो पुरानो मोटरसाइकल : नेपालमै यो ठाउँमा आजै जानुहोस र लिनुहोस महिनाको ११ हजारमै नयाँ कार
पुरुषहरु अर्काकी श्रीमति किन ताक्ने गर्छन ? थाहा पाउनुहोस यसकारण विवाहित महिला प्रति आकर्षित हुन्छन महिला
बलात्कार गरेर मृत्यु भयो भनेर फालेको बुहारीलाई घर बेचेर बचाउने महान सासु
त्रिशूली नदीमा फोहोर नफ्याँक्न आग्रह ! फ्याँकेमा प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही गरिने
यस्ता फलफुल खानाले मासु भन्दा दोब्बर तेब्बर प्रोटिन पाईन्छ यी फलफूल एव् खाद्यबस्तु बाट